तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष सरकारी रकम दुरुपयोग गर्दै, श्रीमतीकै नाममा गाँउपालिकाको नामाकरण ! — Himali Sanchar
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष सरकारी रकम दुरुपयोग गर्दै, श्रीमतीकै नाममा गाँउपालिकाको नामाकरण !
रोल्पा – सरकारी खर्चमा रमाउदै बुटवल, पोखरा हुदै राजधानी पुगे, रोल्पाका गाउँपालिका अध्यक्ष बीरबहादुर केसी, स्थानीय तह बनेपछि गाउँ, गाउँमा बिकास भन्दापनि भ्रष्टचार मौलाएको धेरै तथ्यहरु छन् ।
अध्यक्ष बीर बहादुर यतिबेला उपप्रमुख रिता घर्ती सहित उनी निकटका वडाध्यक्ष बोकेर घुमघाम गर्न मस्त छन् । बीर बहादुर गाउँबाट घुमघाम गदै पोखरा ४ दिनमा पुगे । उनी पोखरा घुमेको फोटो उनका समाचार सहयोगी असोक ओलीले सामाजिक सञ्जालमा सार्बजनिक गरेको छन।
गाउँपालिका अध्यक्षले पिए राख्ने ब्यबस्था छैन । तरपनि बीर बहादुरले २ जना पिए राखेको चर्चा यतिबेला सुकिदहमा सुरु भएको छ । उनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन। भिजनखबरले समाचार लेखेको छ।